Munaasabad Lagu Taageerayay Gudoomiyaha Cusub ee Gobolka Banaadir oo Lagu Qabtay Nairobi “Sawirro” - Wargeyska Faafiye
Munaasabad Lagu Taageerayay Gudoomiyaha Cusub ee Gobolka Banaadir oo Lagu Qabtay Nairobi “Sawirro”
Munaasabad balaaran oo lagu taageerayo gudoomiyaha cusub ee gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho Gen Xasan Maxamed Xuseen ( Mungaab ) ayaa lagu qabtay xaafada islii ee magaalada Nairobi.
Munaasabadan oo ay soo qaban qaabiyeen Gudiga jaaliyadda soomaalidda ee dalkani Kenya ayaa waxaa kasoo qeyb galay mas’uuliyiin kala gadisan iyo qeybaha kala duwan ee bulshada soomaaliyeed ee ku nool dalka Kenya, waxanay dhamaan mas’uuliyiintii goobta ka hadashay hambalyo u direen gudoomiyaha cusub iyo gudoomiyihii hore ee xilka ka degay.
Munaasabada ayaa waxaa ka soo qeyb galay oo hadalo ka jeediyay xildhinaanka laga soo doorto County-ga Kamakunji Yuusuf Xasan Cabdi iyo safiirka dowlada Soomaaliya u fadhiya dalka Kenya Ambassador Maxamed Cali Nuur(Americo).
Munaasabadan oo ahayd mid si heer sare ah loosoo agaasimey ayaa intii ay socotey waxaa khadka telefoonka kaga soo qeyb galay gudoomiyaha cusub ee gobolka banaadir Gen Xasan Maxamed Xuseen ( Mungaab ) isagoo uga mahadceliyay jaaliyadda soomaalidda ee dalka Kenya taageeradda balaaran oo ay u muujiyeen.
Sidoo kale waxaa goobta lagu soo bandhigay Suugaan lagu amaanayo Guddoonka cusub ee gobolka banaadir iyo Ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka soomaaliyeed, waxaana munaasabadan ay ku soo gabo gabowday jawi farxad leh.
Filed in: .Warka, Faafiye Latest news. Tags: Gudoomiyaha Cusub ee Gobolka Banaadir
Recent PostsBoqorka Sacuudiga oo wiilkiisa ka dhigay dhaxal sugeDaawo VIDEO : ‘Gaajo ayuu u dhintay wiil aan dhalay oo shan jir ahaa’Ahmed Kathrada, ninkii la xirnaan jiray Mandela, oo dhintayGeneral favors more aggressive approach in SomaliaUNHCR oo dalbatay baaritaan laagu sameeyay qaxootigii Soomaalida ee Yaman lagu laaayay.Editor’s Pick . Telefoonkii Hitler oo $243 kun oo dollar lagu iibsaday.43Random PostsUgaas caan ahaa oo lagu dilay Kismaayo.Xisbul Islaam oo ka baxay Al-Shabaab.Gal-Mudug oo u dhaartay jidgooyooyinka100 ku dhimatay shil diyaaradeed Algeria.Dowladda Soomaaliya oo taageero ka codsatay Imaaraadka.